Diba फुटबल खेलाडी। अर्जेण्टीनी फुटबल को नयाँ पुस्ता
पाओलो Diba - यो वास्तवमा उल्लेखनीय फुटबल खेलाडी हो। DIB अर्जेन्टिनामा जन्म भएको थियो, तर इटालियन "Juventus" को रूपमा युरोपेली मञ्चमा shone एक प्रारम्भिक उमेर मा। आफ्नो क्यारियर बस सुरु गरिएको छ भनेर उहाँले मात्र 23 वर्ष पुरानो थियो, र उहाँले पहिले नै संसारमा सबैभन्दा होनहार युवा खेलाडीहरू मध्ये एक मानिन्छ। यो एक केन्द्रीय स्ट्राइकर रूपमा कार्य हो, तर त्यो पनि एक बहुमुखी फुटबल खेलाडी हो। Deeb मुख्य र अगाडी आएको दुवै प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि आवश्यक आक्रमण को सही flank मा उपयोगी हुन सक्छ।
फुटबल खेलाडी Deeb अर्जेन्टिनामा जन्म भएको थियो नोभेम्बर 15, 1993, उहाँले दस वर्ष स्थानीय क्लब "संस्थाले" को फुटबल एकेडेमी साथ दिए। आफ्नो युवा क्यारियर मा, उहाँले त्यहाँ निर्माण गरेको छ। उहाँले 18 वर्षको हुँदा 2011, मा, जवान एउटा सम्झौता व्यावसायिक प्रस्ताव थियो। Deeb, को पाठ्यक्रम, यो हस्ताक्षर र त्यसपछि व्यावसायिक स्तरमा आफ्नो भाषण गर्न थाले।
सबैलाई यस संसारमा फुटबल को एक नयाँ बढ्दो तारा छ भनेर बुझ्न लागि एक सिजन पर्याप्त थियो। 38 खेल मा, त्यो युरोपेली क्लब को ध्यान के आकर्षित 17 लक्ष्य, गोल गरेका थिए। र पहिले नै 2012 मा, 19 वर्षीया इटालियन मौका लिए र जो कोहीले पनि अज्ञात अर्जेण्टीनी लागि धेरै योगफल भुक्तानी जो "पालेर्मो", सारियो। 12 लाख देखिन्थ्यो एक फुटबल खेलाडी जस्तै खर्च गर्दैन पागल पैसा। Diba तथापि, अन्यथा साबित भयो।
"पालेर्मो" मा Blossoming
पाओलो Diba - पूरै "पालेर्मो" मा प्रकट भएको छ एक खेलाडी। उहाँले जो 93 खेल मा क्षेत्र मा बाहिर आए र 21 गोल तीन वर्ष, त्यहाँ बसे। धेरै हदसम्म कारण प्रयासमा गर्न 2014 मा क्लब को सेरी बी जीत र अर्को वर्ष र Dibalu युरोपेली अनुदान लिन जहाँ ठूलो लीग एक टिकट प्राप्त गर्न सक्षम थियो। स्वाभाविक, सूची मा पहिलो नाइस 2015 को गर्मी मा 32 लाख यूरो जवान प्रतिभा लागि बाहिर राखे जो "Juventus", थियो। यस समयमा कुनै एक क्लब overpaid कि लाग्यो।
"Juventus" को लागि प्ले
मा "Juventus" DIB तुरुन्तै ठाउँ आधार मा प्राप्त र आफ्नो पहिलो वर्षमा यसको लागि भुक्तानी पैसा जायज छ। 46 खेल मा, त्यो जो दुई लक्ष्य तीन वर्ष भन्दा बढी "पालेर्मो" मा छ, 23 गोल। उहाँले क्लब लीग र coppa इटाली जीत मदत, र त्यहाँ रोक्न रहेको छ। हालको मौसम मा, पाओलो चार लक्ष्य र दुई सहायता चिन्ह लगाइएको थियो, तर क्षणमा उहाँले आफ्नो चोट लागेको रिकभर 11 खेल, प्ले छ।
कारण अर्जेन्टिना गरेको आक्रमण संसारमा सबै भन्दा राम्रो फर्वाडहरु एक प्ले भन्ने तथ्यलाई गर्न, Deeb अक्सर राष्ट्रिय टोलीलाई भनिन्छ छैन। मिति, उहाँले एक लक्ष्य स्कोरिङ बिना मात्र छ मिलान प्ले छ।
राष्ट्र 2013 को अफ्रीकी कप: खोज र निराशा
Aleksey Igonin, फुटबल जीवनी
Solovyov पार। स्मोलेन्स्क को लडाई। स्मारक जटिल
बचत बैंक एसएमएस सूचना कसरी असक्षम? प्याकेज कसरी असक्षम "मोबाइल बैंकिंग"
एक चरम देखि: फिल्म "परमेश्वरको छोरी" को समीक्षा
मस्कोको म्याट्र्रोनाको मठबाट रोटी: कहीं देखि एक चमत्कार
20 औं शताब्दीको सर्वश्रेष्ठ फिलिम: सूची र समीक्षा
रेखाचित्र, फोटो, र आकार: आफ्नो हातमा Huskies लागि Aviary। यो एक पिंजरे मा Huskies राख्न सम्भव छ? को पिंजरे गर्न Huskies कसरी सिकाउन?
यो साँच्चै प्रसिद्ध जूलिया Golubtsova?